Vhenezwera - ALinks
Ndeipi mutengo wekugara muVenezuela?
Dai 9, 2022 Demi mari, Venezuela
Mari inofungidzirwa yekugara muVenezuela i9,000 Bs.S pamwedzi kumunhu mumwechete. Mhuri yevana inokwanisa kushandisa mari inosvika zviuru zviviri nemazana mashanu emaBs mumwedzi. Iyi ndiyo mari yekurarama pasina rendi. Mari yeVenezuela
Chinyorwa chemabhangi muVenezuela
Dai 5, 2022 Demi Banks, Venezuela
Iyo yakakura hurongwa hwemari yeVenezuela yakaratidza kukurumidza kukura. Izvo zvaive zviri pakati pama1950 nema1980. Iyo yakaratidza hunyanzvi kuvapo kwemasangano ayo. Muna 1989, bazi rezvemari raive nemabhangi makumi mana nemasere. 41 masisitimu emari ehurumende,
Nzvimbo dzakanaka muVenezuela dzaunoda kushanyira
January 14, 2022 Demi zvinhu zvekuita, Venezuela
Venezuela inyika ine tsika dzakasiyana pamhenderekedzo yeNorth yeSouth America. Inyika ine nzvimbo inoshamisa, kubva pamhenderekedzo yegungwa kusvika pamusoro memakomo. Tarisa uone kunyorwa kwenzvimbo dzakanakisa muVenezuela
Kutsvaga basa kuVenezuela? Tarisa uone kuti Unowana Sei Mumwe
November 21, 2020 Demi mabasa, Venezuela
Kutsvaga basa kuVenezuela? Kana kuti akatamira kuVenezuela nguva pfupi yadarika? Tinogona kukubatsira nekuchiwana. Nyika yacho inozivikanwa nembanje yayo yepeturu. Zvakare, iri pakati penyika gumi nembiri kwazvo megadiverse pasi rose. Sezvo, iyo
VeVenezuel? Tarisa Maitiro Ekunyorera Kune Asylum Dziviriro
April 22, 2020 Demi vapoteri, Venezuela
Sekutaura kweUNHRC, vanhu veVenezuela vari kusiya nyika yavo. Vari kuita izvi nekuda kwekuwedzera kwemhirizhonga, kusagadzikana uye kutyisidzira. Zvakare, pari kutarisana nekushomeka kwechikafu, mushonga uye nebasa rakakosha. Kubva kuUNHRC inoshuma
April 22, 2020 Demi Venezuela, visa
Venezuela iri kuSouth America kuchamhembe kwegungwa. Ine huwandu hwevanhu vangangoita 3.7 macro, Inozivikanwa nemafuta, vakadzi vakanaka, Star Falls, uye baseball players. Kana iwe uri kuronga kushanyira Venezuela. Yezororo, kutsvagisa, musangano webhizinesi, uye
February 4, 2020 Demi kudzidza, Venezuela
Kuronga kudzidza kuVenezuela tarisa kumayunivhesiti manomwe epamusoro muVenezuela. Wepamusoro maUniversity muVenezuela Zvinoenderana ne topuniversities.com, kune mayunivhesiti mapfumbamwe muVenezuela ayo ari mukati meanzvimbo muYunivhesiti Chinzvimbo (2018) neQS Latin America University
Chinyorwa chezvipatara muVenezuela
February 2, 2020 Demi utano, Venezuela
Sangano reVenezuela rezvehutano rakakamurwa zvakapatsanuka kuita zvikamu zviviri zviri zveveruzhinji uye zvakavanzika zvikamu. Rondedzero yechipatara ine imomo nzvimbo uye nhamba yefoni zvinopihwa muchinyorwa chino. Chipatara cheYunivhesiti - Maracaibo Chipatara Luis Razetti - Barinas
VeVenezuela system yekutakura
February 1, 2020 Demi tenderera, Venezuela
Iwe hausi kuzowana chero chitima muVenezuela asi hongu kune akawanda mabhazi saka iwe unokwanisa kufamba zviri nyore mukati menyika nemabhazi, mota, uye matekisi. Izvo zvakakosha kuti ugare uchitakura kadhi rako rekuzivisa, senge
January 30, 2020 Demi zvinhu zvekuita, Venezuela
Hatigone kutora zvese nesu kuenda kune imwe nzvimbo nyowani kunyangwe tichida kutora uye izvo zvinoita kuti zvive zvakakosha kwazvo kuva neruzivo nezvezvitoro zviri padhuze nepakati kana zviri mune iyoyo nyika / guta. Muizvi